R/W Khayre: Waxaan u Mahad Celinayaa Dhaqaatiirta Go’aansaday Inay Safka Hore Ka Galaan Dagaal Lamid Ah Kan Xabbadda La’isu Dhigo. – Wakaaladda Wararka Soomaaliyeed
Muqdisho; (SONNA)---Ra’iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda, mudane Xasan Cali Khayre oo ummadda Soomaaliyeed ugu hambalyeeyay munaasabadda Ciidda ayaa dhaqaatiirta iyo howl wadeennada caafimaadka uga mahad celiyay dadaalkooda nafhurnimada leh ee safka hore ay uga galeen dagaalka loogu jiro kahor tagga iyo xakameynta COVID19.
“Waxaan dhammaan Ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan ugu hambalyaynayaa maalinta ciidda ah. waxaan rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed hortooda uga mahad celiyo dadka Soomaaliyeed ee habeen iyo maalin taagnaa sida dhibaatadu usoo billaabatay. Waxaa ugu horrreeya wasaaradda caafimaadka iyo dhaqaatiirta Soomaaliyeed ee u taagnaa inay dad Sooomaaliyeed badbaadiyaan, aan arkin qoysaskooda aan arkin caruurtooda, ee go'aansaday inay safka hore ka galaan dagaal lamid ah dagaalka xabbadda la'isu dhigo"”, ayuu yiri Ra’iisul wasaare Xasan Cali Khayre.
"Anigoo ku hadlaya magaca xukuumadda, waxaan leeyahay mahad iyo sharaf ayaad ummadda Soomaaliyeed usoo jiideen. Abaal ayaa ummadda Soomaaliyeed idiin heysaa horumar ayaad gaarteen inta idiin dhimanna waxaan leeyahay dhammeystira", ayuu yiri Ra'uusul Wasaaruhu.